Sicela ukufuniswa uNosipho Sinalo Mthitshane ongumama kaSimphiwe Mthitshane ubaba wakhe wayengu Thabani Nkandi ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane noSonhlalakahle u-A.S. Mncube kule nombolo 033 505 0083/4/7. Sicela ukufuniswa ubaba kaZanele Mhlongo waseMpolweni umama wakhe owayengu Nozipho Nxano ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane noLungile Mazibuko ku 083 365 2539. Sicela ukufuniswa uNtombifikile Ngcobo ongumama kaMlondi Ngcobo. Onolwazi sicela athinte uSonhlalakahle uNksz Mahaye eMbilakhahlela Ku 033 392 8642.
Sicela ukufuniswa ubaba ka Okuhle Mbanjwa igama lakhe alaziwa ukuthi ubani. Umama ka Okuhle ubehlala e-Willowfointain. Onolwazi sicela axhumane noSonhlalakahle uTS Mncwabe Ku 033 392 8610 noma avakashele amahhovisi ethu kwaMbilakhahlela.
Sicela ukufuniswa ubaba ka Andile Msomi igama lakhe uKhehla Mdunge, ohlala e-Dalton, umama ka Andile ongasekho emhlabeni ubehlala e-Willowfointain. Onolwazi sicela athintane noSonhlalakahle uTS Mncwabe Ku 033 392 8610 noma avakashele amahhovisi ethu kwaMbilakhahlela. Sicela ukufuniswa ubaba kaNontombi Khululiwe Mbele igama lakhe uSdudla Mbele ohlala e-Ladysmith, umama ka Nontombi ubusisiwe Buthelezi ongasekho emhlabeni obehlala e-Willowfointain, onolwazi sicela athintane noSonhlalakahle uTS Mncwabe Ku 033 392 8610.
Sicela ukufuniswa ubaba kaSinethemba Mhlongo wase Willowfointain, umawakhe uSibongile Mhlongo ongasekho. Onolwazi sicela athintane noSonhlalakahle uTS Mncwabe Ku 033 392 8610.
Sicela ukufuniswa uNkosibonile Phungula ongubaba kaSibusisiwe Mabaso ozalwa uDudu Mabaso ongasekho emhlabeni, onolwazi sicela athintane noTS Mncwabe Ku 033 392 8610.